Xfce 4.14 iri pano, izvi ndizvo zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Luis Lopez | | Desks, GNU/Linux
Nemakore angangoita mana ekuvandudza kumashure kwake, vhiki ino yekupedzisira pakupedzisira Iyo yekupedzisira vhezheni yeinotarisirwa XFCE 4.14 graphical nharaunda yasvika.
Xfce 4.14 ndiyo yazvino vhezheni yakagadzika yeyakareruka graphical nharaunda uye inoona zvese zvakakosha zvikamu zvakagadziridzwa kuGTK3, rutsigiro rweGObject raibhurari, uye kuwanda kwakawanda uye kugadzirisa bug.
Iyo Xfce 4.14 desktop ikozvino ine Vsync rutsigiro, inoshanda zvirinani neHIDPI monitors, uye inotora mukana weXInput2. Zvakare, zvinouya nekubatana zvirinani nemidziyo yeNvidia madhiraivha uye inounza nyowani default theme.
Iko kune nyowani yebasa rondedzero yekuwedzera inowanika yeiyo Xfce control panel uye pari zvino paine chiratidzo chemapoka windows pamwe neiyo nyowani pani icon saizi yekuisa uye nyowani default default fomati.
Zvino maneja wechikamu Xfce-chikamu zvinokutendera kuti uwedzere nekugadzirisa zvinyorwa zveostostart, zvinoratidza bhatani idzva re "switch mushandisi" muhwindo rekubuda, uye anosarudza musangano anowana akati wandei shanduko dzakanaka zvakare.
Iyo maneja wefaira thunar inoratidza iyo ichangobva kunyorwa kero bar, inounza rutsigiro rwembambo, uye zvirinani keyboard yekufambisa. Kana iwe uchida kuziva shanduko dzese dzeshanduro iyi nyowani unogona kuona iyo rondedzero yakazara.
Ungawana sei Xfce 4.14?
Kusiyana nemamwe mafomu, kuwana yazvino vhezheni yeXfce 4.14 inonetsa nekuda kwezvinhu zvese zvinoshandurwa.
Xfce 4.14 iri kuuya neXubuntu 19.10, ine zuva rekuburitsa Gumiguru.
Asi kana iwe uchida kuyedza iyi vhezheni nyowani izvozvi, unofanirwa kushandisa desktop chaiyo kana kuve nechimwe chekugovera ne "Rolling kuburitswa" modhi yakadai seArch Linux kana Manjaro, ese ari maviri achave neiyi desktop inowanika mumazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Xfce 4.14 iri pano, hezvinoi zvitsva
Iyo nyowani vhezheni yeFFmpeg 4.2 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo